ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
AOX-M စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuတွင်or ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အားလုံး ပေါင်းစုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ (linear ရွေ့လျားမှု အခင်အရှင်s)such အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင်, ဂိတ် အခင်အရှင်, နှင့် etc.အဆိုပါ အနားကွပ် တွေ့ဆုံ ISO ကို 5210 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ stနှင့်ard. အဆိုပါ AOX-M စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuတွင်or ဖြစ် IP67 ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် နိုင် ဖြစ် instအားလုံးed တွင် မည်သည့် angle.Because ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန် များမှာ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကျြောစောသော ဘို့ အရည်အသွေး, တည်ငြိမ် operတွင်ion နှင့် လုံခွုံသော operတွင်ion. ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန်, အဖြစ် အစဉ်အမြဲ, ဆက်လက် thဖြစ် လမ်းကြောင်းသစ် နှင့် လိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲမှု။
အထူးဒီဇိုင်းမြင့်မားစတင် torque မော်တာ, မကြာခဏအပြည့်အဝတံခါးပိတ်အနေအထားကနေအဆို့ရှင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သုံးအဆင့် AC အမော်တာများအပြင်, Single-အဆင့် AC အကိုလည်းပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ် AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
တိုက်ရိုက် torque လက်ငင်း 40 nm ကနေပိုးဂီယာအုံနဲ့ပေါင်းစပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ် 1000Nm.When AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုအထိ, အများဆုံး torque output ကို 50,000Nm မှတက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ပိုကောင်းပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ်ကုမ္ပဏီ၏ AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှားအာရှအတွက်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ရေ, ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ထိုကဲ့သို့သောအတွက် IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-သက်သေပြ, etc.Strict အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရယူထားပြီး အားလုံးအဆင့်ဆင့်နှင့်အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးလှံတံ၏သဘောတူညီမှုဖြစ်ပါတယ်။
AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်မှုစက်တပ်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator အကြောင်းကိုငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းမေး:
မေး: သင်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ်သင့်ရဲ့ AOX-M စီးရီးဒေသခံထိန်းချုပ်ရေးအတွက်မဆိုလက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်